M/xigeenka Somaliland Abdirahman Zaylici oo wasiirradii hore ku eedeeyey in ay qabiil ahaan u qoran jireen la taliyayaal aan aqoon iyo waaya aragnimo lahayn, Muse Bixina uu go’aansaday in uu eryo. | Somali News Network - Magaalo.com
M/xigeenka Somaliland Abdirahman Zaylici oo wasiirradii hore ku eedeeyey in ay qabiil ahaan u qoran jireen la taliyayaal aan aqoon iyo waaya aragnimo lahayn, Muse Bixina uu go’aansaday in uu eryo.
Submitted by Anonymous on Fri, 01/12/2018 - 08:46
Awdalpress – London – Madaxweyne ku xigeenka Somaliland oo ah shakhsiga ugu waayo aragsan systemka Somaliland lagu maamulo, ayaa xilligan la shaqaynaya Muse Bixi oo ah nin aan la garan karin sida uu yeelayo amma uu wax u wado.
Muse Bixi oo isna ah shakhsi la dhashay maamulka Somaliland horteedna ka mid ahaa xarakadii SNM, ayaa doonaya in uu is beddello badan ku sameeyo habkii iyo dhaqankii ay Somaliland ku soo jirtay 26 sano. Isbaddalka noocaasi ahina waa mid guul iyo guul darro labadaba keeni kara. Laakiin ugu horreyntiiba waxa uu qalday shaxdii ay dawladda Somaliland u dhisnayn, ee weliba laga cabanayey, welina waxa laga sugayaa in uu saxo, si ay wada lahaanshaha Somaliland u saxanto.
Bal hadda immiga aan daawanno Abdirahman Zaylici oo eedeynaya wasiirradii hore iyo systemkii uu ka midka ahaa, ee waa sida uu hadalka ku dhigaye dadka qaar lagu naas nuujin jiray. Su’aasha ay dad badani is weydiinayaanna waxa ay tahay, Zaylici laftiisu dad tolkii ah ma naas nuujin jiray, oo xilalkaa uu sheegayo ma u magacaabay?